Nnwale ule ikuku dị ala - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Nnwale ule ọmụmụ dị ala na-enyocha ikike nke njikọta iji nwee kọntaktị elekere kwesịrị ekwesị n'okpuru obere okpomọkụ. Mgbe ngwaahịa na-gụrụ a ala okpomọkụ gburugburu ebe obibi ruo ogologo oge, arụmọrụ, ọrụ, àgwà, na ndụ nke ngwaahịa nwere ike na-emetụta. Nke a chọrọ ule dị ala nke ngwaahịa iji nyochaa nguzogide ngwaahịa na okpomọkụ dị ala.
Jera gaba ule n'okpuru ngwaahịa
-Low, n'etiti & elu voltaji shiee isi bolt lug.
Onye njikpu ihe mkpuchi mkpuchi tozuru etozu kwesiri inwe mmekorita eletriki di n'etiti ndi na-eduzi ya mgbe ha no na okpomoku di ala. Anyị debere ya n'ime ụlọ ntu oyi ma nwalee kọntaktị eletriki ya mgbe ọnụọgụ nke nut na-edozi.
Testkpụrụ nyocha anyị dịka CENELEC, EN 50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T1190-2012 maka ngwa nkesa eletriki. Anyị na-eji ule ule na-esote ngwaahịa ọhụrụ tupu ịmalite, maka njikwa mma kwa ụbọchị, iji jide n'aka na ndị ahịa anyị nwere ike ịnweta ngwaahịa ndị na-egbo mkpa chọrọ.